Baarlamaanka Jubbaland oo ka hadlay mooshin Laga Gudbiyay. – SBC
Baarlamaanka Jubbaland oo ka hadlay mooshin Laga Gudbiyay.
Posted by SBC Editor on May 6, 2015 Comments
Baarlamanka Cusub Ee Jubbaland
Guddoomiyaha Baarlamaanka Maamulka Jubbaland, ayaa ka hadlay mooshinkii laga gudbiyay Baarlamaankaasi oo ay gudbiyeen Xildhibaano ka tirsan Baarlamaanka Jamhuuriyada Federaalka Soomaaliya.
Xildhibaanada mooshinkaan gudbiyay ayaa waxa ay gaarayaan 43-Xildhibaan oo dhamaantood kasoo jeeda Gobolada Jubbooyinka, waxa ayna sababta mooshinka u gudbiyeen ku sheegeen inay tahay in hab qaldan loo maray soo xulista Xildhibaanada Maamulka KMG ee Jubba.
Guddoomiyaha Baarlamaanka Maamulka Jubbaland Cabdi Maxamed C/raxmaan oo la hadlay Warbaahinta Magaalada Muqdisho, ayaa wuxuu sheegay in Baarlamaanka Soomaaliya uusan xaq u laheyn in mooshin ay ka gudbiyaan Baarlamaanka Maamulka KMG Jubbaland.
Cabdi Maxamed, ayaa sheegay in Baarlamaanka Maamulka Jubbaland uusan ku imaanin hab qabiil ee uu ku yimid Degmooyin, waxaana soo xulay ayuu yiri Odayaal dhaqan oo taasi waxa ay ka wada siman yihiin Baarlamaanka Soomaaliya oo Odayaal Dhaqameed ay soo xuleen.
“Baarlamaanka Jubbaland deegaan ayuu ka yimid iyo xisaabtan wuu ka duwan yahay Federaalka mana aaminsani mooshinkooda inuu saameyn leeyahay, Baarlamaanka Soomaaliya Oday dhaqameed ayaa soo xulay, midkaana sidoo kale Oday dhaqameed ayaa soo xulay, marka ila ma’ahan wax saameyn ah inuu nagu yeelanaayo mooshinkaasi.”Ayuu yiri Guddoomiyaha Baarlamaanka Maamulka Jubbaland.
Dhawaan ayaa lagu wadaa in Magaalada Kismaayo ay ka dhacdo xaflada caleemo saarka Guddoomiyaha Baarlamaanka Maamulka Jubbaland iyo ku xigeenadiisa.
Baarlamaanka Jubbaland ayaa ka kooban 75 Xildhibaan, marka laga reebo Guddoomiyaha iyo ku xigeenadiisa, waxaana qaabka Xildhibaanada loo soo xulay si weyn u saluugsan Xildhibaano Dowladda dhexe ka tirsan oo deeganadaasi kasoo jeeda oo mooshinka u gudbiyay Guddoomiyaha Baarlamaanka Soomaaliya Jawaari.